Fiiri Apache OpenOffice iyo Sidebar cusub. | Laga soo bilaabo Linux
Fiiri Apache OpenOffice iyo Sidebar cusub.
marianogaudix | | Aplicaciones, GNU / Linux
A 'qarsoodi ah peek' oo ka mid ah dhinaca is-dhexgalka adeegsadaha ee ku cusub Apache OpenOffice 4.0, oo aan horey uga soo hadalnay hal munaasabad.
Apache OpenOffice 4.0 oo ku taal Ubuntu.
Apache OpenOffice 4.0 ee Windows 7.
Si aad u soo degsato Apache OpenOffice 4.0 beta waxaad ku sameyn kartaa cinwaanka soo socda.
Soo Degso Apache OpenOffice
Ka kooban xirmooyin loo heli karo:
Si cad, aasaaska Apache wuxuu kiciyey lambarka 'Lotus Symphony code', oo leh wijiyadaha la hagaajiyey iyo maktabadaha vcl oo ay dib u qortay IBM. IBM waxay ku salaysnayd OpenOffice waqtigaas, laakiin waxay ka takhalustay maktabadaha vcl iyaga oo hagaajinaya iyaga oo si fiican u eegaya dhinac.
Koodhku wuxuu ku hoos yaal liisanka Apache iyo BSD. Sidaa darteed maktabadahaan iyo kor u qaadista (koodhka dib loo qoray) laguma hirgelin karo LibreOffice sababo la xiriira isku dhacyada liisanka, nasiib daro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Fiiri Apache OpenOffice iyo Sidebar cusub.
31 faallooyin, ka tag taada
Sidoo kale xiriiriyeha soo dejintu ma aado soo dejinta, wuxuu aadaa OpenOffice Sidebar wiki!
Hoos waxaad ka arki doontaa xiriiriyeyaasha soo dejinta,
Xidhiidhada soo dejinta ayaa u muuqda sida soo socota.
Ku jawaab marianogaudix
Fikradayda ayaa ah inaysan ku raaxeysneyn in laga ag ag dhigo sida haddii ay ahaan laheyd dukaan gacmeed ama sawir
Ku jawaab WaKeMaTTa
Nambarka leh liisamada Apache iyo BSD waxaa lagu isticmaali karaa mashruuc GPL ah sida LibreOffice; waxa dhici karin waa caksiga. Xaqiiqdii, lambarka BSD waxaa loo isticmaali karaa mashaariicda lahaanshaha.
Sidaan ogahay, LibreOffice waxay wax kaqaadaneysaa OpenOffice.
Ku jawaab Ankh
Waxaan u maleynayaa inay isku mid tahay! Ma jiraan wax dhibaato ah oo ka dhalan kara fulintiisa, liisanka Apache wuxuu kaliya u baahan yahay in ogeysiis la hayo oo ogeysiinaya dadka qaata lambarrada leh Apache License ayaa loo isticmaalay qaybinta. Xitaa shaqooyinka deriska ah waa lagu xiri karaa shuruudaha shatiga kale.
Su’aal u dir Micheal Meeks.
waadna arki doontaa wuxuu kuu sheegayo.
Dhab ahaan, qoraaga qoraalkan sifiican looma wargalin. LibreOffice, waa liisankaaga mugga MPL / LGPL, wuxuu ka qaadan karaa lambar Apache, halka Apache uusan ka qaadan karin lambar LibreOffice.
Been kale ayaa ah in IBM "uu dib u qoray widget-yada VCL iyo" maktabadaha "(sic)". Qof kasta oo raacaya waxa ay sameeyaan keydka AOO waxaad ku ogaan doontaa inay jiraan lambarro badan oo nuqul ah (iyo astaamo nuqul sidoo kale). Dabcan, nadiifinta ayaa loo baahan yahay in la sameeyo, laakiin waan ka shakisanahay.
Fitoschido waxaad siineysaa war duug ah oo Apache OpenOffice 3.6.
Kaasoo uu Micheal Meeks hubiyey oo aanu arag wax isbeddel ah.
Taasi waa sababta Apache OpenOffice 3.6 ay la mid tahay Oracle OpenOffice 3.4.
Fitoschido waxaan ka hadlaynaa Lotus Symphony halkaas oo aalad cusub lagu qoray laguna adeegsaday. In xafiiskii hore ee Open 3.6 aysan jirin oo LibreOffice aysan iyagana lahayn.
Ilaa intaan ogahay ma aanan arkin widget-ka buugga la hubiyay ee 'libreoffice', qalab-gacmeedka, badhamada midabka, Lotus combobox-yada wax shaqo ah kuma laha aaladaha LibreOffice.
Dhammaan waxyaalahan la adeegsaday ee widget-yada ah kuma jiraan LibreOffice
Soo-saareyaasha LibreOffice dhib kuma qabin inay ka dhigaan aaladahaan bilicsanaanta bilicsanaanta, haddii ay horay uga jiri jireen LibreOffice.
Laakiin kama jiraan LibreOffice.
Ragga ku sugan LibreOffice waxay i tuseen API-kooda mana aanan arag widget-yadaas.
Waad weydiin kartaa Micheal Meeks.
Isaga laftiisa ayaa sheegay in Apache uusan la wadaagin isla falsafada LibreOffice.
Ruqsadaha labada mashruucba waxay calaamadeeyeen kala tag.
Micheal Meeks wuxuu ii sheegay in LibreOffice uusan ku arki doonin isbeddelo xagjir ah qaabkeeda, iyo in LibreOffice ay kusii socon doonto jidkeeda.
Waxay ka soo wareegtay in ka badan 1 sano tan iyo markii la siidaayay Lotus Symphony oo LibreOffice aysan ku dhicin isbadal xagjir ah oo ku yimid qaabkeeda ilaa waqtigaas.
Taasi shaqo kuma laha xaqiiqda ah in LibreOffice ay adeegsan karto lambarka BSD haddii ay rabto. Ma fahmin waxaad isku dayeyso inaad dooddo.
Hagaag, horumariyeyaasha LibreOffice sababo laxiriira kaladuwanaanshaha mashruuca Apache iyo liisanka.
Hada ma hirgalin doonaan Lotus code.
Tan waxaan kala hadlay iyaga oo xiisaynaya.
Waxay sidoo kale ii sheegeen in isbedelka LibreOffice uusan noqon doonin mid xoogan sida Apache OpenOffice 4.0 iyo in muuqaalka garaafka uu ku ekaandoono sida kan hada jira.
Waxay umuuqataa dhinaca bidix ee Calligra
Ku jawaab kaliya-kale-dl-isticmaale
tuka 22 dijo
Taasi waa sax 😀 aad isugu eg.
Ku jawaab truko22
Rootiya 87 dijo
Waxay gabi ahaanba i xasuusineysaa calligar 0.0 mahadsanidiin waa mashaariic ilo furan hehehe
Ku jawaab Rots87
Taasi waa waxa aan dhihi lahaa, waa clavaito.
Ku jawaab SnocK
Ku saabsan waafaqsanaanta liisanka, waxay kuxirantahay nooca liisanka BSD ee aad isticmaaleyso. Qoraaga ayaa laga yaabaa inuu saxan yahay.
Mhh xiiso leh, laakiin maahan inaan ka helayo isku xirnaanta mid aad u wanaagsan, heerku wali wuu hooseeyaa, waa inay kireystaan ​​nashqadeeyayaasha.
Mediocre waa eray aad ufudud oo lagu sharaxo wax, ugu dambeyntiina, haddii aad dhaleeceynaysid, ku samee aasaas,
Marka way nuugtaa, waa hagaagtaa, is-dhexgalka ma xuma intaas ka dib, waxaa kaliya lagu hayaa caligra, dib-u-dhac ka dib kolkii furitaanku ka dhashay bilowga sannado badan ka hor ...
Ku jawaab cristianhcd
Aynu isku dayno inaan aragno sida ay wax u socdaan ..
In kasta oo aan doorbido Libreoffice marka hore uguna muhiimsan!
Ku jawaab st0rmt4il
Waan isku dayi doonaa, in kastoo maskaxdayda astaanta OpenOffice horeba loo mariyey.
Ujawaab Christopher Castro
Waxaan sidoo kale la socdaa LibreOffice, waxaan ka caawiyaa LibreOffice inta aan kari karo.
Waxaan u qorsheynayaa xirmo sumcad aan rasmi ahayn LibreOffice, oo ku saleysan Faenza.
Astaamo aad u wanaagsan, waan isku dayay iyaga iyo libreoffice-kayga hadda wuxuu u muuqdaa mid aad uga wanaagsan.
Waad ku mahadsan tahay waqtigaaga iyo dadaalkaaga.
Salaan ka timid Chile.
Ku jawaab mono
Waad soo dhoweyneysaan, waxaan isku dayi doonaa inaan sameeyo wax walba oo suuragal u ah bulshada barnaamijka bilaashka ah inay horumariso
xitaa astaamahan fudud.
Aad baad u mahadsantahay. Waqti kadib anigana waan tijaabin doonaa, fursad labaad ayaa la siin karaa
Ka jawaab provando
LibreOffice waxay raacdaa falsafadda softiweerka bilaashka ah, halka Apache Open Office ay raacdo tan isha furan. Sidaa awgeed khilaafkooda muuqda, in kasta oo la arko in Apache Open Office uu i xasuusiyo Office XP markii uu soo baxay.
Waxaan u hambalyeynayaa kuwa adeegsada Apache Open Office, maxaa yeelay inkasta oo geeddi socodka horumarka gaabis yahay, waxay muujinayaan inay rabaan inay ka dhaadhiciyaan adeegsadayaasha MS Office in isha furan ay la mid tahay wax soo saar la mid ah soodhawaynta ilaha xirmooyinka leh.
Waxaan jeclaan lahaa inaan isku dayo, qofna ma garanayaa haddii aan ku rakibi karo si la mid ah LibreOffice ee Ubuntu 12.04?
Ku jawaab gallaecia
Haa, illaa intaad ka soo degsanaysid goobta rasmiga ah. Sidan ayaan ku sameeyay libreoffice 4 wax dhib ahna kalama kulmin xirmooyinka "beddelashada".
Waxaan rakibay Lotus Symphony in muddo ah si aan awood ugu yeesho inaan wax uga beddelo dukumiintiyo badan isla waqtigaas maadaama ay iila muuqatay mid aad iigu raaxeysan sababtoo ah xaqiiqda ah inay kaga furmay daaqad isku mid ah laakiin tabs, iyadoon loo eegin inay yihiin xaashiyo ama dukumiinti qoraal ah. .
Yuriy Istochnikov dijo
Aad ayay u xun tahay in Apache Open Office uusan haynin muuqaalkaas ... waxay noqon laheyd farxad 😛
Jawaab Yuriy Istochnikov
Waxaan filayay isla wixii Apache OpenOffice 4.0 uu la mid noqon lahaa Lotus Symphony.
Farqiga u dhexeeya khadka iyo Whatsapp.
Khadadka ayaa dhaafey 130 milyan oo soo dejin ah.